Wararka - Calaamadaha adduunka waxay diiradda saarayaan Shiinaha
Calaamadaha adduunka waxay diiradda saaraan Shiinaha
Waxaa la aasaasay 1985, Ururka Baaskiilka Shiinaha (CBA) waa urur qaran oo ka socda warshadaha Baaskiilka ee Shiinaha, waa urur bulsheed oo aan faa'iido doon ahayn iyo qof sharci ah. Waxaa si iskaa wax u qabso ah loogu sameeyay baaskiil, baaskiil koronto iyo qeybaheeda wax soo saar, iyo sidoo kale wax soo saar la xiriira iyo ganacsiyo, cilmi baaris cilmiyeed, cutubyo waxbarid iyo ururo maxalli ah. Ururku wuxuu leeyahay ku dhowaad 500 xubnood oo kooxeed ah, iyo waxsoosaarka sanadlaha iyo dhoofinta labadaba waxay ku xiran yihiin 80% wadarta warshadaha.
Shiinaha 2019 wuxuu ka kooban yahay aag guud oo dhan 150,000 oo mitir murabac ah, oo soo jiita 1,224 shirkado oo ka kala socda 26 dal iyo gobol si ay uga qaybgalaan bandhiga, oo wadar ahaan ah 6,365 waab. Gawaarida baaskiilka iyo qaybo ka sokow, waxaa kale oo jira goobo lagu soo bandhigo baaskiilada korantada, ciyaalka yar yar iyo sahayda baaskiilka ee banaanka. Thailand iyo dalal kale Xirfadlayaal ka socda Wasaaradda oo ka kala socda in ka badan 100 dal iyo gobol sida Mareykanka, Jarmalka, Faransiiska, Talyaaniga, Holland, Japan, India, South Korea iyo Spain ayaa la filayaa inay soo booqdaan. Bandhigga Shiinaha ayaa noqday mid ka mid ah kuwa ugu badan bandhigyo baaskiil xirfadeed muhiim u ah adduunka. Dhaqaalaha maanta adduunka ee jahwareerka ku jira, bandhigga Shiinaha ayaa wali soo jiidanaaya dareenka ballaaran ee warshadaha, taas oo muujineysa in heerka caalamiga ah ee bandhigga Shiinaha uu yahay mid aan la gariirin karin! Wada-hawlgalayaasha Shiinaha ee xulashada koowaad, bandhigga Shiinaha ayaa ah gacmo furan oo lagu soo dhaweynayo martida ka kala socota adduunka oo dhan inay yimaadaan carwada iyo wadaxaajoodka.
Soo-saareyaasha ajaanibta ah, noocyada iyo kuwa wax iibiya waxay u arkaan Shiinaha inuu yahay saldhig ay kala soo baxaan alaabtooda, suuq weyn oo iyaga u gaar ah, iyo saldhig lagu beero noocyadooda. Bandhigga Shiinaha wuxuu u noqday marxaladda ugu wanaagsan ee ay ku xaqiijin karaan riyadooda. Tagista Shiinaha, ku soo bandhigidda Shiinaha, iyo tagaya meelaha ay sida ugu wanaagsan uga fahmi karaan himilooyinkooda waxay noqotay mid lama huraan u ah maalgashadayaasha shisheeye. sanadkasta.
Baaskiil Balance Balance, Balance Baaskiil, 20 Baaskiil Inch / Baaskiil, Baaskiiladaha, Balance Baaskiil, Baaskiil Balance Caruurta,